Xubno ka tirsan FIFA oo lagu xidh-xidhay Switzerland – Radio Daljir
Maajo 27, 2015 3:03 b 0
Arbaco, May 27, 2015 (Daljir) —Booliska Dalka Switzerland ayaa xiray dhowr xubin oo ka tirsan saraakiisha ugu sareysa Hay’adda FIFA kuwaas oo loo dhoofin doono dalka Mareykanka kadib markii lagu eedeeyay Musuq-maasuq sida ay qortay New York Times subaxnimadii saakay.
Iyadoo todobaadkaan lagu balansan yahay shir weynahii 65-aad ee Hay’adda ugu sareysa Kubada Cagta ayey ciidamada boosliska Swiss qabteen xubno sar-sare oo ka tirsan Fifa, balse New York Times ayaa xaqiijisay in xubnahaas la qabtay uusan ku jirin Madaxweynaha haatan talada Fifa haya ee Sepp Blatter.
New York Times waxey sidoo kale sheegtay in xariga ay sameeyeen ciidamada Swiss ay ka dambeysay kadib codsi ka yimid Waaxda Cadaaladda Mareykanka.
In ka badan 10 xubin ayaa la qabtay kuwaas oo lagu eedeeyay iney adeegsadeen Fowdo iyo Lacago la dhaqay waxeyna arintaan socotay in ka badan 20-sano sida ay sheegtay New York Times iyadoo arintaan ay ku lug yeelaneyso labada koob aduun ee lagu qaban doono Russia iyo Qatar 2018 iyo 2022-da.
Sidoo kale CNN-ka ayaa sheegtay in xubnahaan lasoo qabtay ay mari doonaan baaritaan sadex sano ah oo ay sameyneyso FBI-da mareykanka.
Ugu dambeyntii xubnahaan ma noqonayaan kuwo howshooda kasii wata, iyadoo doorashada FIFA ay dhici doonto Jimcaha waxaana ku tartami doona Sepp Blatter iyo Prince Ali Bin Al Hussein.
Howl-galka Qaramada Midoobay ee Soomaliya oo waqtiga loo kordhiyay